(Daawo Muuqaal+Warbixin)…Magaca iyo asal ahaan dalka uu ka soo jeedo Ninkii weeraray Baarlamaanka Kanada oo la helay |
(Daawo Muuqaal+Warbixin)…Magaca iyo asal ahaan dalka uu ka soo jeedo Ninkii weeraray Baarlamaanka Kanada oo la helay
Dalka kanada oo maalmahaan ay ka jirto cabsi iyo weeraro is xig xigay oo ay ku soo qadeen kooxo xiriir hoose la leh ururka Daacish oo ka dagaalama wadamada Ciraaq iyo Siiriya ayaa markii ugu horeeysay waxaa la aqoonsaday ninkii weeraray Baarlamaanka dalka Canada.
Ninkaan ayaa magaciisa waxaa lagu sheegay Michael Zehaf Bibeaux waana 32 jir ku dhashay dalka Canada balse waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa dalka Aljeeriya. Ninkaan oo qalqal weyn galiyay baarlamaanka Kanada wuxuu afka hore ee Baarlamaanka ku toogtay Askari ilaaliye ahaa oo lagu magacaabi jiray Nathan cirillo .
Ugu dambeyntii Ismiidaamiyihii magaciisa lagu sheegay Michael Zehaf Bibeaux oo la toogtay ayaa waxaa la soo ogaaday inuu Acontiga Twitter-ka xiriir kula lahaa kooxda Daacish. Dowlada Canada ayaa ku jirta wadamada ku dhawaaqay la dagaalanka maleeshiyaadka ururka Daacish waxaana shacabka dalka Canada ugu baaqay inay is dajiyaan Raisul wasaaraha dalkaas Mr. Stephen Harper oo sheegay inaysan joojin doonin dagaalka ay kula jiraan ururka Daacish.
Maalmo yar ka hor ayay eheed markii nin u dhashay dalka Canada oo laga celiyay Jihaad uu u socday waliba sanad ka hor laga qaaday Baasaboorkiisa, uu gaari soo kaxeeystay ka dibna si ula kac ah u jiirsiyay askar meel wado ah maraysay .